Weeraryahanka Chelsea Romelu Lukaku Oo Doonaya Inuu Ku Laabto Serie A
HomeWararka CiyaarahaWeeraryahanka Chelsea Romelu Lukaku oo doonaya inuu ku laabto Serie A
May 27, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka kooxda chelsea ee Romelu Lukaku ayaa lagu soo waramayaa in uu dajiyay qorshihii uu dib ugu soo laaban lahaa horyaalka Serie A-da, wax ka yar hal sano oo uu ka tagayo kooxda Inter Milan .
Xiddiga heerka caalami ee dalka Belgian ayaa dib ugu soo biiray Blues xagaagii hore 97.5 milyan ginni, inkastoo uu xilli ciyaareedka ku dhameystay isagoo ah gooldhaliyaha ugu sareeya Chelsea isagoo dhaliyay 14 gool tartamada oo dhan, wuxuu ku guuldareystay inuu gaaro heerkii laga filayay inuu ku laabto Stamford Bridge.
Bishii Disembar, Lukaku wuxuu si cad u sheegay inuu doonayo inuu ku laabto Talyaaniga iyo gaar ahaan Inter Milan, taasoo ka dhigan in laga saaray 11-kii kulan ee soo socda ee Thomas Tuchel .
Sida laga soo xigtay Tuttomercato , AC Milan iyo Juventus ayaa sidoo kale muujinaya xiisaha ay u qabaan 29-sano jirkaan, laakiin sharciga canshuuraha Talyaanigu waa hubaal inuu caqabad weyn ku noqon doono heshiis kasta.
Xitaa haddii uu ku jiro heshiis amaah ah, Lukaku ayaa lagu soo waramayaa in looga baahan yahay inuu dhimo mushaharka weyn ee uu hadda qaato £ 275,000 todobaadkii, iyadoo kooxaha Serie A aysan xaq u yeelan doonin inay isticmaalaan ikhtiyaarka canshuur kordhinta, sababtoo ah Lukaku waqti gaaban oo uu ka maqan yahay.
Intii uu Lukaku ku sugnaa Inter waxa uu dhaliyay 64 gool 95 kulan oo uu saftay,waxana uu kooxda kula guulaystay horyaalka Talyaaniga.